शिवको अर्धनारीश्वर स्वरूपको रहस्य - Kendrabindu Nepal Online News
शिवको अर्धनारीश्वर स्वरूपको रहस्य
२४ भाद्र २०७६, मंगलवार १६:२४
भगवान् शिव अचम्मका छन् । पौराणिक ग्रन्थहरू सरसर्ती अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने शिवजस्ता त्यागी कोही पनि छैनन् भने शिवजस्ता प्रेमी पनि कोही छैनन् । कामदेवलाई भष्म गर्ने पनि उनै शिव अनि सतीदेवीलाई काँधमा बोकेर डुल्ने मात्र नभई अर्धनारीश्वरकै स्वरूप धारण गर्ने पनि शिव ।
शिवको अर्धनारीश्वर स्वरूप सृष्टिमा नर एवं नारी अर्थात् पुरुष र महिला समानताको प्रतीक हो । संस्कृतका महाकवि कालिदासले आफ्नो महाकाव्य रघुवंशम् मा यसरी शिवपार्वतीको वन्दना गरेका छन्–
वागर्थाविवसम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये । जगत पितरः वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ।।
अर्थात् शब्द र अर्थको ठीक ज्ञानका लागि म शब्द र अर्थजसरी मिलेर बसेका पार्वती र परमेश्वर शिवलाई वन्दना गर्दछु । यसरी शक्तिसँग एकाकार भएर वा शब्द र अर्थझैँ अभेद रूपमा मिलेर बस्नसक्ने शिव मात्रै छन् ।
अर्धनारीश्वर स्वरूप किन बन्यो ? के छ रहस्य ?
भनिन्छ, सृष्टिको संरचनापछि ब्रह्माजीले जब मानिसको सृष्टि गरे, उनलाई के बोध भयो भने यो सृष्टि छिटै नाश हुन्छ किनभने उनले पुरुषको मात्र सृष्टि गरेका थिए । उनले मानस सृष्टि मात्र गरेका थिए । अर्थात् त्यो मैथुनी सृष्टि थिएन । उनले पुत्रहरू मात्र सृष्टि गरे पुत्री भएनन् । सृष्टि चलाउनका लागि सन्तानको आवश्यक पर्छ । त्यसलाई अघि बढाउनका लागि मैथुनको आवश्यकता पर्छ र मैथुनका लागि विपरीत लिंगीहरू अर्थात् महिला र पुरुष दुवैको आवश्यकता पर्छ । तर समस्या, ब्रह्माको मानस सृष्टिमा महिला भएनन् । यस्तो समस्याको समाधान गर्न ब्रह्मा शिवजीको शरणमा गए । उनले कठोर तपस्या गरे । ब्रह्माजीको तपस्याबाट प्रसन्न भएका शिवजीले समस्याको समाधानस्वरूप ब्रह्माजीका अगाडि आफ्नो अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट गरे । यस रूपमा उनी आधा शिव थिए भने आधा शिवा । यसप्रकार शिवजीले मानिसलाई प्रजननशील बनाउने प्रेरणा दिएर सृजनको सन्देश दिए । त्यसपश्चात् ब्रह्माले महिलाको पनि सृष्टि गरे अनि उनीहरूमार्फत मैथुनी सृष्टिको सुरुवात गराए ।
अर्धनारीश्वर स्वरूपमार्फत शिवजीले महिला र पुरुष समान छन् भन्ने कुरा दर्शाए । उनले महिला र पुरुष दुवै प्रकृतिका अभिन्न अंग भएको र यी दुईमध्ये कुनै एकको अभावमा सृष्टि सम्भव नहुने रहस्य बताए । शिवको अर्धनारीश्वर स्वरूपको आराधना गर्नु भनेको महिला र पुरुष अर्थात् शिव र शक्ति दुवैको आराधना गर्नु हो । यसकारणले अर्धनारीश्वर स्वरूपको ठूलो महत्व छ ।
शिव र शक्तिको सम्बन्ध
शक्ति शिवको अविभाज्य अंग हुन् । शिव नरका प्रतीक हुन् भने शक्ति नारीका । यी एकअर्काका पूरक हुन् । शिवविना शक्ति तथा शक्तिविना शिवको अस्तित्व सम्भव हुँदैन । दुवै अधुरा हुन्छन् । कतिसम्म भने शिवबाट शक्ति हट्नेबित्तिकै ऊ शव बन्दछ ।
शिव अकर्ता हुन् अर्थात् उनी संकल्प मात्र गर्छन्, संकल्पलाई सिद्ध गर्ने काम शक्तिबाट हुन्छ । शिव कारण हुन् भने शक्ति कारक हुन् । शक्ति जागृत अवस्था हो भने शिव सुषुप्तावस्था । शक्ति मस्तिष्क हुन् भने शिव हृदय । शिव आगोका ज्वाला हुन् भने शक्ति ताप । यस हिसावले पुरुष बाहिरी शक्तिका प्रतीक हुन् भने महिला अन्तर्शक्तिका प्रतीक हुन् । यी दुवैको सहकार्यबाट मात्र सृष्टि अघि बढ्छ । कुन ठूला र कुन साना भन्ने तर्क गर्नु नै बेकारको कुरा हो ।
अर्धनारीश्वर स्वरूप, कतिसम्म भने शिवबाट शक्ति हट्नेबित्तिकै ऊ शव बन्दछ ।, वागर्थाविवसम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये । जगत पितरः वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ।।
Prev‘माननीयज्यू ! मानिस र फोहर एकै स्थानमा रहन सक्छ कि सक्दैन ?’
व्यक्ति हत्याको सुपारी, पेस्तोलसहित बाराका शम्भु पक्राउNext